IPAKO 2 ikwenza uzive ufana nomphathi ophambili woMqhubi | I-Androidsis
Ukubetha igesi kwiPAKO 2 ukukhupha amapolisa
IPAKO 2 isizisela yonke into eyenze yaduma kangaka ukuya kwi-PAKO yokuqala, umdlalo weemoto apho kwakufuneka sibaleke emapoliseni kwaye kolu hlelo lutsha lusibeka phambi komsebenzi ofanayo. IPAKO 2 ngumdlalo oneembekiselo ezicace gca kuloo moto inkulu ibaleka imovie ebizwa ngokuba yiDriver kunye neRyan Gosling.
Kwaye iPAKO 2 ifuna ukuba ungene ezihlangwini zomqhubi ohlawulwa kakuhle kakhulu ungena kwiindlela ezipheleleyo zokubaleka ukuze amapolisa aphume emdlalweni kwaye sinokufikelela kwiziqhamo. Umdlalo onikwe ukugqwesa okubonakalayo kwaye oku kuya kukubamba ukusuka kumzuzu wokuqala wokudlala.
1 IPAKO 2 a Lo uMqhubi kunye nayo yonke icala layo le-cinema
2 Umnwe we-ochontero oyinika oko
3 Phuma ngazo zonke iindleko
IPAKO 2 a Lo uMqhubi kunye nayo yonke icala layo le-cinema
KwiSedan yethu, isithuthi sokuqala ukusebenzisa kwaye yenye yezo moto zaseMelika, kuya kufuneka sibe nesibindi esaneleyo kwivili lokuhamba kumanqanaba okuqala. Njengazo zonke iimuvi ze-VHS ezisibhozoSiza kuzifumana sisebenza nawo onke loo mapolisa angafuni ukuba siphumelele.
Ngohlobo oluthile olubonakalayo, kuya kufuneka silandele utolo ukusenza kwimidlalo yokuqala ngePAKO 2, umdlalo wenze kakuhle kwaye oko kuyakukubambisa ngokukhawuleza.
Kwaye akuyi kufuneka kuphela Betha amavili apha naphaya ukuze ulahle amapolisa, kodwa siya kudubula ngokuzenzekelayo ngasekhohlo nangasekunene okuya kuphelisa ezo moto zinzima zamapolisa.
Umnwe we-ochontero oyinika oko
Ngolo cingo lwe-ochontero kwi-PAKO 2 kuyakufuneka silumke kakhulu ukuba singawi kwiigorge, kuba yindawo esiqhuba ngayo enye yeengxaki esiza kuba nazo kwimidlalo yethu. Njengathi sinayo ukwazi ukusebenzisa iziqhushumbisi kakuhle eziveliswayo xa singqubana nezinye iimoto, kuba ziya kuhlala zisidlalela ukuba sinobuchule kwivili.
Ngaphandle kwento yokuba kwiPAKO 2 sihlala sinokukhetha thenga iimoto ezintsha ezahlulwe ngenani labo leendawo zokubetha, isantya sabo okanye isixhobo sabo. Ezi nkcukacha zokugqibela zinokuthi zithathelwe ingqalelo ukuze siphume kwezona ndawo zinzima esinokuthi sizifumane nazo. Gcina imali ukuze wenze intlama elungileyo kwaye ubenezixhobo ezinamandla amakhulu kuhlaselo lwakho.
Phakathi kwekhathalogu yemoto yePAKO 2 onokuyithenga iveni, i-OG, imoto yezemidlalo, i-4X4 yee-greatsRally iimoto, iilori kunye neendidi ezahlukeneyo zazo zokuqhekeza intambo endleleni. Ngethamo elikhulu lesakhono kunye nomonde unokuba nesona sithuthi silungileyo sokuphuma kula mapolisa abalekileyo.
Phuma ngazo zonke iindleko
IPAKO 2 isinika ukonwaba okukhulu kunye nothotho lolungelelwaniso ukufumana okungakumbi ekusebenzeni nakwimizobo. Oko kukuthi, sinako tshintsha isisombululo semveli siye ku-1920 x 1080, Yandisa umgangatho wegraphic kwaye ulinganise iphedi yomdlalo ukusenza ngcono ngolawulo lomdlalo.
Kancinci kancinci uza kuhamba ukuphucula kunye nokufikelela kwezo ndawo zokukhangela oko kuyakuvumela uvuselele imoto yakho kwaye uqhubeke nokutshabalalisa amapolisa. Ngayo yonke le nto uyakongeza imali eninzi kwityala lakho ukuvula imishini kwaye ufumane izithuthi ezitsha.
Ngale ndlela uya kubandakanyeka ngokupheleleyo kuwo wonke umdlalo we-PAKO 2 kwaye oko kukutsalele kutshintsho lokuqala. Umdlalo ekhethekileyo kubathandi bemoto kunye nokusebenza ngobuninzi; ukuba ungumntu othanda izinto eziqhelekileyo intloko kuhambo lweBirdy.
Ngokobuchwephesha, ikhathalelwe kakuhle kwaye ime ngakwisimbo sayo sokubonakalayo, iziphumo zayo ezibonakalayo kuqhushumbo kunye nokubetha kwezinye izithuthi, umculo oza kukoyikisa kunye nobunzima obukhethwe kakuhle ukuze uqhubeke nokudlala ngaphandle kokuyeka. Unayo simahla ukusuka kwiVenkile yokuDlala kuGoogle, ke ukuba awufumananga ukuba inxenye yayo yesibini ifikile, ngoku ungayindwendwela kwangoko. Sicebisa ukuba uqwalasele inqanaba lomzobo ukuze ufumane ukusebenza okungcono kwimidlalo nganye.
Vumela amapolisa akulandele ngalo lonke ixesha
Ingoma yesandi iyinika indawo yayo
Kuya kufuneka uqwalasele imizobo ukuze ufumane ukusebenza
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » Ukubetha igesi kwiPAKO 2 ukukhupha amapolisa
IGreen Note 9 inokongeza iqhosha elitsha lokuthatha iifoto kunye neefoto